Akhriso: Farmaajo iyo Hoggaamiyaasha Maamullada Oo Warsaxaafadeed Wadajir Ah Soo Saaray.
Sunday November 05, 2017 - 16:24:13 in Wararka by Super Admin
Ku dhowaad 10 maalmood oo ay magaalada Muqdisho u fadhiyeen shir lagu sheegay xasaasi ayay soo saareen warmurtiyeed aan waxbadan ka duwaneyn kuwii hore.
Madaxweynaha dowladda Federaalka Max’med Cabdullaahi Farmaajo iyo 5 kamid ah hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa warsaxaafadeed ay warbaahinta uqeybiyeen waxay ku sheegeen in ay ku heshiiyeen illaa iyo 8 qodob.
waxyaabaha ay ku heshiiyeen ma ahan kuwa cusub waana wixii ay marwalba kasoo saari jireen shirarkii loogu magac daray ‘Madasha Qaranka” balse arrimaha warsaxaafadeedka kusoo laa laabanayay ayaa ahaa ciribtirka waxa loogu yeero ‘Argagaxisada’.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Hoggaamiyaasha maamullada ay iska diidiyeen dalab ka yimid Kheyre iyo Farmaajo oo ahaa in lakala diro golihii lagu dhisay Kismaayo ee mideynayay dhammaan madaxda maamul goboleedyada.
Nuxurka qodobada ay dhinacyadani ku heshiiyeen ayaa imaanaya xilli mugdi badan uu kujira wadashaqeynta u dhaxaysa maamul goboleedyada iyo DF-ka waxaana xusid mudan in si aad ah ay ugusoo celceliyeen ladagaallanka Argagaxisada oo ah mashruuc ay ku raalli gelinayaan dowladaha shisheeye.